RASMI: Kooxda AC Milan oo xaqiijisay saxiixa xiddigii xulka Algeria ka caawiyey hanashada AFCON ee Ismael Bennacer – Gool FM
RASMI: Kooxda AC Milan oo xaqiijisay saxiixa xiddigii xulka Algeria ka caawiyey hanashada AFCON ee Ismael Bennacer
Haaruun August 4, 2019
(Barcelona) 04 Agoosto 2019. Kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa xaqiijisay saxiixa Ismael Bennacer, kaasoo xulkiisa qaranka Algeria ka caawiyey hanashada koobka qarammada Afrika ee AFCON 2019, waxaana ay kala soo wareegeen Empoli.
AC Milan ayaa laacibkan khadka dhexe ee Ismael Bennacer kala soo wareegeen kooxda reer Talyaani ee Empoli, waxaana ay ku soo qaadatay adduun dhan 14.5 milyan oo gini.
21-sano jirkaan hibada kubadeed leh ayaa qalinka ugu duugay heshiis shan sanadood ah kooxda ka dheesha horyaalka Serie A ee AC Milan.
Bennacer ayaa xulkiisa qaranka Algeria ka caawiyey ku guuleysiga koobka qarammada qaaradda Afrika intii lagu guda jiray xagaaga, waxaana loo magacaabay ciyaaryahankii ugu fiicnaa tartankaasi.
Wuxuu ku soo qaatay kooxda Arsenal intii u dhaxeysay 2015 illaa 2017 ka hor inta uusan ku biirin Empoli, waxaana Gunners lagu soo waramayaa inay go’aansatay inaysan qaadanin ikhtiyaar ay dib ugula soo wareegaan xiddigan.
Bennacer ayaa kaliya hal kulan ka soo muuqday kooxda Arsenal, isla markaana waxaa uu kulankaasi ahaa ciyaar uu bedel ku soo galay kulan League Cup ah.
Waxa uu soo metelay xulka qaranka Faransiiska ee xiddigaha da’doodu ka hooseyso 18-jirrada iyo 19-jirrada ka hor inta uusan dooranin inuu u ciyaaro xulka qaranka Algeria sanadkii 2016.
RASMI: Kooxda Barcelona oo xaqiijisay saxiixa Junior Firpo
“Ma waxaad i leedihiin Saalax ayaa ka fiican De Bruyne” – Guardiola oo dood ka keenay xulashada abaal-marinta The Best